दिपक गिरिबाट निर्मल डागि / रमेश पाण्डे र राजु खनालबाट तिलक रावतको नगर सभापतिमा चर्चा - जागरण अनलाइन
दिपक गिरिबाट निर्मल डागि / रमेश पाण्डे र राजु खनालबाट तिलक रावतको नगर सभापतिमा चर्चा
२०७८ भाद्र २३, बुधबार २१:३३
कांग्रेस घोराही नगरसभापतिको चर्चा सुरु : दिपक गिरिबाट निर्मल डागि,रमेश पाण्डे र राजु खनालबाट तिलक रावतको
दाङ, भदौ २३ । नेपाली काँग्रेसको १४औं महाधिबेशन अन्तरगत वडा र क्षेत्रीय प्रतिनिधिको निर्वाचन सम्पन्न भएसंगै दाङमा अब नगर अधिबेशनको चर्चा सुरु भएको छ । यही भदौ २९ गतेका दिन नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकको नेतृत्व चुन्ने गरि अधिबेशनको मिति तोकिएको छ ।
यो संगै घोराहीमा संभावित आकांक्षीहरुको चर्चा सुरु भएको छ ।
कांग्रेस घोराही १० नारायणपुरबाट चुनाब जितेर क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा चुनिएका निर्मल डागि, रमेश पाण्डे र तिलक रावत नगरसभापतिका आकांक्षी हुन । निर्मल घोराही १० का वडा अध्यक्ष हुन । रमेश घोराही १५ का वडा अध्यक्ष छन । नारायणपुरको कांग्रेसको चुनाबमा पनि दिपक पाण्डे र निर्मलले मिलेर पार्टीको वडा ईकाइ सभापतिमा उम्मेद्वार उठाएका थिए । सामाजिक क्षेत्रमा पनि डागि र पाण्डे दुबै लोकप्रिय नै छन ।
युवामाझ निकै लोकप्रिय दुबै नेता हाल बिभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा कृयाशिल छन भने सामाजीक संघ सस्थाको नेतृत्वदायी भुमिका रहेर काम गरिसकेका छन । गएको नगर सभापतिको चुनाबमा पाण्डे मनोज बुढाथोकीसंग पराजय बेहोरेका थिए । डागिले नगर सभापतिमा आफ्नो उम्मेद्वारी दिने इच्छा नभए पनि पार्टीका असल शुभेच्छुकबाट उठ्न सुझाब आइरहेको र टिममा सल्लाह गरेर निर्णय दिने बताए ।
स्रोतका अनुसार निर्मल र रमेश मध्य एउटा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सिंचाई मन्त्री दीपक गिरीको तर्फबाट घोराही नगर सभापतिका उम्मेदवार हुन । पाण्डेले बिद्यार्थि राजनितिबाट कांग्रेसको राजनितिमा होमिएका थिए ।
त्यस्तै नेबिसंघ क्षेत्र नम्बर २ का सभापती भएर काम गरेका तिलक रावत पनि नगर सभापतिमा कस्सिएका छन । बिद्यार्थि राजनितिमा आएका तिलक संविधान सभा सदस्य राजु खनाल र क्षेत्रिय सभापती भुपबहादुर डागिबाट एक्ला आकाङ्क्षी हुन । तिलक भदौ २२ गते घोराही १५ बाट क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका ब्यक्ति हुन ।
युवामाझ लोकप्रिय छबि बनाएका रावत रास्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देबकोटा र राजु खनालको प्यानलबाट घोराही १५ मा क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा लोकप्रिय मत पाएर निर्वाचित हुने मध्यका एक युवा हुन ।
लोकप्रिय छबि बनाएका निर्मल र रमेश मध्य एउटा र तिलक बीच प्रतिपर्धा हुने हल्लाले काँग्रेस भित्रको राजनीति तरंगित हुन थालेको छ ।
घोराहिमा केन्द्रीय सदस्य गिरीको बलियो गुट छ भने घोराहीमा राजु खनालको समुहले पनि उत्तिकै बलियो दाबी गर्दै आएको छ । त्यसैले उनीहरुले आ–आफ्नो गुट निर्माण गरि उम्मेदवार खडा गरि प्रतिपर्धा गर्दै आएका छन् । त्यस्तै २ नम्बर क्षेत्रको क्षेत्रिय सभापतिमा दिपक गिरिको समुहबाट गिरिराज सुबेदिले दाबी गरेका छन। सुबेदिले आफू उम्मेद्वार हुने र क्षेत्रभरिको प्रतिनिधी हेर्दा आफ्नो पक्षमा माहोल बनेको पनि बलियो दाबी छ । तर, खनाल-डागि समुहबाट भिमप्रकाश खड्काले दाबी गरेको छ । खड्काले आफुले चुनाब जित्ने दाबि गरे ।
एमाले घोराही ७ को वडा अधिबेशन सम्पन्न, सर्बसहमतिमा नयाँ नेतृत्व चयन
२०७८ कार्तिक ६, शनिबार १८:५५
कांग्रेस घोराही नगरको चुनाबमा राजु-भुपबहादुरको प्यानलको एकल बर्चश्व !
२०७८ आश्विन ९, शनिबार २३:५७
काँग्रेस महाधिबेशन : घोराहीमा तिलक रावत नेतृत्वको टिममा पदाधिकारीको टुंगो लाग्यो
२०७८ आश्विन ७, बिहीबार २१:५५
पौडेल समुहबाट कांग्रेसको घोराही नगर सभापतिको रेशमा बिद्यार्थि नेता निरज गिरि !
२०७८ आश्विन ४, सोमबार ००:०७
कांग्रेसको घोराही नगर सभापतिबाट रमेश पाण्डे एकाएक ब्याक
२०७८ आश्विन २, शनिबार १८:४४
लुम्बिनी डिआइजि मुकुन्द आचार्यले भने-शंकर पोखरेल विरुद्धको रुपन्देहीको उजुरी दाङमा लिन तयार छौ, उजुरी आए कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ !
२०७८ भाद्र २९, मंगलवार २३:०४
अपहरण र शरिर बन्धकको आरोपमा शंकर पोखरेलविरुद्ध बिमला वलीले प्रहरीमा दिइन् किटाणि जाहेरी
२०७८ भाद्र २९, मंगलवार २२:३९
कांग्रेस युबा नेता प्रदिप सुबेदीद्वारा नगर उपसभापतिमा उम्मेद्वारी घोषणा
२०७८ भाद्र २३, बुधबार १२:४०